Tendrombohitr'i Adama (Sri pada) ~ Journey-Assist - Ascent sy ny razana. Tips. Ny tantara
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Tendrombohitr'i Adam (Sri on)
Tendrombohitr'i Adama - Tendrombohitra Adama (Sri pada)
29 Desambra, 2019
Tempolin'ny tampon'ny Tendrombohitra Adam Adam
Adin-tsaina momba ny tendrombohitra Adam Adam
Hanatona ny tampony
Avy any an-tampon 'i Adama
Nahoana no tena "Pintan'i Adama". Sinton'ny toerana masina
Weather in the Adam's Peak androany
Tendrombohitra Adam ao amin'ny sarintany
Ny tendron'i Adam. Famerenana ankapobeny
Lalana amin'ny alina mankany amin'ny sahan'i Adam
Tendrombohitra masina izy io, fitsangatsanganana izay tena malaza amin'ny mpizahatany any Sri Lanka.
Ny haavon'ny toerana ara-kolotsaina dia 2243 m. An'arivony ny solontenan'ny fivavahana 4 manao fivahiniana masina eto isan-taona, anisan'izany ny Kristianina.
Eny, mazava ho azy, ireo mpizahatany no tsy mitanila amin'ity toerana ity!
Raha ny salanisa, maharitra 4 ora ny fiakarana azy. Raha manomboka miakatra amin'ny fiandohan'ny alina ianao, eny amin'ny farany dia hihaona amin'ny maraina ianao.
Vakio bebe kokoa ny fiakarana eto ambany, satria eto dia ny zavatra rehetra dia tsy tsotra loatra.
Mifarana amin'ny tampon-tanan'i Adama
Mba hihanihana io tenda io dia mila mandany 2,5 ora ianao. Manomboka amin'ny 6 maraina ny maraina. Raha te hanana fotoana hahitany azy, dia mila miala tsy mihoatra ny 3 alina ianao. Ary raha kasaina ny fiakarana amin'ny andro iray amin'ny vanim-potoana ambony, dia tsara kokoa amin'ny 2 ora. Mety ho be dia be ny olona amin'ity andro ity!
Amin'ny alina dia tsara kokoa ny miakatra fa noho ny andro dia misy ny hafanana (+30 degre), ka sarotra be ny miakatra. Ary ny fihaonana maraina ny tendrombohitra dia tsy hita maso!
Fidirana amin'ny lalana mankany amin'ny sahan'i Adam
Alohan'ny fiakaran'ny tenany, tsy lavitra ny toerana angonan'ny fanomezana, dia mahita sarivongana be Buddha iray ianao. Na izany aza, na dia miala amin'ny fidirana mankamin'ny dingana feno miakatra ianao, dia hahita tolotra maro hanaovana fanomezana.
Bouddha eo am-pototry ny sahan'i Adama
Nisy tohatra 5 200 tohatra mankany amin'ny tampony. Amin'ny faritra sasany dia tapaka izy ireo, fa amin'ny ankapobeny dia ny mahazatra ny tohatra dia azo antsoina hoe normal. Teo akaikin'izany dia misy mpivarotra sakafo sy rano avy amin'ny fivarotana tanana sy kafe izay ahafahanao mihinana sy mamono ny hetahetanao.
Amin'ny fotoan'ny maraina, eo an-tampon'ny tendrombohitra, miposaka ny masoandro noho ny havoana tendrombohitra maranitra, manazava lohasaha midadasika. Manova ny loko avy amin'ny burgundy ka mavo mavo. Ny fijery mahafinaritra toy izany dia mendrika hitranga eto amin'ny alina. Ny karazany sy ny hazavan'ny loko, izay mifanolo afaka minitra vitsy, dia sarotra ny manoritra amin'ny teny ary mampita mihitsy amin'ny sary.
Mandany adiny 2 ny sasany any aoriana. Reraka be koa ny tongony.
Miandrandra ny tsirairay ho sarotra avy eo amin'ny fiakarana izany, saingy tokony marihina fa ny hozatry ny tongotra "clogged" miaraka amin'ny fiakarana dia ho fanoherana ny fitsinjo. 🙂
Rehefa nanao ny razanay dia tsara ny manantona ireo hozatra amin'ny tongotra, raha tsy izany dia handratra andro maromaro.
Aza adino ny mijery manodidina. Ny fianjeran'i Adam's Peak dia hanokatra panoraha tena mahafinaritra! Ka raha ho vitanao ny hitia azy ary hiezaka ny haka azy amin'ny sary, dia mety ho tara ny mando. 🙂
Oay! Eo am-pototry ny tendrombohitra, aorian'ny midina eny amin'ilay tetezana mitovy amin'ny rindrina iray, dia mahita gidro maro ianao. 🙂
Inona no tokony homena anao?
Makà jiro maivana. Ny fiakaran'ny alina miaraka amin'ny hatsiaka sy ny hamandoana avo.
Mila akanjo fialana. Ho lena ianao. Na tsy mando lena ianao, dia ny rahona izay hivoahanao na ny ahitra mangatsiaka kosa dia “hamandoana” anao 🙂
Ny jiro mandrehitra tsy ho superfluous. Tsy tapaka foana ny tohatra mankany amin'ny Lalan'i Adama, ary eto ny dingana eto
Makà sunblock. Mety ho mafana ny ando, ary raha tsy rakotry ny rahona ny masoandro, dia hahatsapa izany amin'ny herin'ny Sri Lankan rehetra 🙂
Tsy hanenenanao izany raha mitondra thermos misy kafe na kafe ianao. Ho reraka sy saro-kenatra ianao rehefa miakatra any ambony.
Inona no hantenaina eo an-tampon'ny tampon'i Adama
Niposaka ny masoandro avy eo amin'ny sisin'ny tohatra fiakarana. Hividianana toeram-pitsikilovana mahafinaritra raha vao haingana
Eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny tohatra miakatra avy eo an-tampon-tananan'i Adama no ahitanao alokaloka avy amin'ny Piran'i Adama. Ity seho goavana amin'ny halehiben'ny sehatra ity dia tsy hamela olona tsy hiraharaha
Aloky ny tampon'ny Adam's
Rehefa faran'ny herinandro, mety misy tsipika sy olona marobe amin'ny tohatra. Ary eo an-tampony dia aza manantena toerana malalaka be avy amin'ny olona.
Aza manantena ny havela hiditra ao amin'ny tempoly eo an-tampony. Mihidy matetika amin'ny olon-tsotra io. Farafaharatsiny amin'ny alina! Na dia tsy mijanona ho an'ny maro aza izany, dia miakatra eny ambonin'ny fefy izy ireo mba hahafahany manararaotra ny masoandro kokoa.
Ao an-tampony ao an-trano, araka ny fitsipika dia misy mpiantsona. Vonona ny hivarotra kafe foana amin'ny vidiny iray amin'ny tsirairay izy. 🙂
Indrindra fa mpizaha tany sy mpivahiny maro ny volana feno.
Tempoly sy stupa amin'ny lalana mankany Adma Peak
Sombiny kely momba ny maha-fototra an'io toerana io
Io tendrombohitra io dia nahazo ny anarany (Adin'i Adam's Peak) noho ny tsangambato vato kely, izay misy ny famoizam-po, mampatsiahy ny endriny miaraka amin'ny sombin-tongotra amin'ny haben'ny biby goavambe.
Ny Kristiana sy ny Silamo
Ny kristiana sy ny silamo dia mino fa rehefa nandroaka an'i Adama tao amin'ny sahan'i Edena Andriamanitra, dia nidina avy tany an-danitra izy ary nandray ny dingana voalohany amin'ity havoana ity. Ary inona marina moa ny dian-tongotr'i Adama voasambotra teo amin'ny vato iray eo ambony.
Ny Hindoa sy ny bouddhisme
Ny Hindio dia maniry ny hino fa navelan'Andriamanitra Shiva io marika io. Noho izany, ho azy ireo, ity tendrombohitra masina ity no antsoina Shiva Nadi Padan
Mino ny Bodista fa lalan-kalehan'ny Buddha, ary ny tendrombohitra izay nantsoin'izy ireo dia nantsoina Sri Pada
Ary misy aza mino fa namorona olona voalohany teto ambonin'ity tendrombohitra ity.
Ny fomba iray na ny iray hafa dia tsy fantatra ho fantatra hoe rahoviana sy rahoviana no nitranga tao amin'ity tendrombohitra ity. Saingy misy ny toeran'ny mpivahiny sy mpizahatany an'arivony mitety ny tampon'ity tendrombohitra ity, na inona na inona fahasahiranana amin'ity fiakarana ity.
Tempoly sy làlan'i Adama eo ambony
Fihaonana kely any ivelan'ny fambolena Adam ny tampon-tampon'ny Adam's Peak. Ny toerana masina indrindra amin'ny alàlan'ny tongotra ihany dia lampihazo voahodidin'ny rindrina ambany ambany. Ny refin'ny tranokala dia 21 ka hatramin'ny 10 metatra. Natsangana teo ny tempoly iray, teo akaikin'ilay toerana misy ny hakiviana eo amin'ilay vato. Raha raisintsika ho toy ny fomba fijery io, dia tokony hieritreritra isika fa ity trace ity dia lehibe lavitra noho ny an'ny olona iray! Ny halavany dia 160cm ary ny halavany 75cm.
Adin'i Adam / Shiva / Buddha teo amin'ny Tendrombohitra Adam Adam
Ny lalana dia tsy mora jerena, satria ny voninkazo hatrany hatrany. Miara-miasa aminy tsy misy fetra ny mpihetsiketsika, nanoroka vato iray, manipy voninkazo, vavaka fifaliana.
Marihina fa ny siansa dia mbola tsy liana tamin'ity relic ity, ary tsy mbola nisy fikarohana fikarohana teto.
Ny trano fandraisam-bahiny akaikin 'ny tampon' i Adam
Raha te hihaona ny maraina amin'ny Pihaonan'i Adam ianao, dia andramo hametraka hotely akaiky akaiky ny fanombohan'ny fiakarana. Misy maro amin'izy ireo, saingy amin'ny vanim-potoana ambony dia tsara kokoa ny mitandrina mialoha.
Weather in the Adam's Peak. Azo tanterahina sy lavitra an'izany!
Widget niova fo feno. Azonao atao ny manova ny sosona ho mety aminao (rivotra, orana, kotrokorana, rahona, sns).
Maimaimpoana ny fidirana, saingy eo am-piandohan'ny fiakarana dia hasaina ianao hanao fanomezana. Manao izany rehetra izany izy ireo, fa ho an'ny isan-karazany.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/WYFHBPKLz6nqs8g68
Adam Peak Reviews
Adam Peak Review (valin'ny Google)
Adam Peak Review (Tripadvisor)
Diso fanantenana no hita fa be dia be ny fako izay hita eny amoron-dàlana mandritra ny fianarany. Na izany aza, ny "Sri Lankans" manokana dia tsy "mihena" amin'ny tontolo madio. Saingy ny fiakarana mankany amin'ny Lalan'i Adama dia mihoatra lavitra noho ny lesona mendrika. Ary mahafinaritra ny maraina manomboka eo, ary amin'ny ankapobeny dia hita fa mahavariana ilay tontonana izay misokatra manomboka amin'ny telo kilometatra avo. Ary ho fitsapana ny herin'ny iray, tena mendrika ny fiakarana.
Ary mahagaga ireo fomba fiasa misokatra mandritra ny fandalinana. Amin'ny toerana sasany, tsy mety mino aho fa tena misy izany rehetra izany.
Ary eny. Ny sary, toy ny horonantsary, dia tsy mahavita mamoaka ny habetsaky ny zavatra hita eo mivantana!
Manoro hevitra tsara ny fitsidihana!
Na dia manao fahatsapana lalina toy izany aza ireo sary, azoko sary an-tsaina ny mampientanentana ny fahitana an'ity tany iainana ity! Fotoana hikarakarana ny kitapom-bolanao!